ADA Zviwanikwa muKushanda
Posted on July 19, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Akaremara vagari vakatarisana nematambudziko mukuyedza kurarama hupenyu hwezuva nezuva. Kubva pakuva nezvinetso kuwana zvivakwa kusvika kumatambudziko kushandisa kutakura kuve nematambudziko mukuverengerwa mune yakajairwa upenyu, ivo remara ndakafanirwa kukurira kusagadzikana kwenguva refu.
Pamusoro penyaya yenhoroondo, remara vanhu vakafanirwa kusangana nematambudziko muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Nekuda kwematambudziko aya, Hurumende yeUS yakatora maAmerican nehurema Mutemo muna1990.
VaAmerican vane hurema Mutemo wakasainwa kuita mutemo musi waChikunguru 26, 1990 naMutungamiri Bush. Iyo ADA mutemo wakapamhama wekodzero dzevanhu unorambidza, pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, rusarura rwakavakirwa pa kuremara. Inopa dziviriro inoenderana neiyo rusarura kuvaAmerica vane hurema seCivil Rights Act ya1964, iyo vakaita rusarura zvichibva parudzi, chinamato, bonde, nyika kwavakabva, uye zvimwe hunhu zvisiri pamutemo. Kuremara inotsanangurwa neADA se "kukanganisika kwepanyama kana kwepfungwa kunogumira kwakakura chiitiko chehupenyu"Kutsunga kwekuti pane chero chaicho mamiriro ari inofungidzirwa se kuremara inoitwa pane kesi nenyaya. Chokwadi chaiwo mamiriro "zvinodzivirirwa sehurema, sekushandisa zvisina kufanira zvinodhaka nekusaona zvakanaka izvo zvinogadziriswa nemalenses ekurapa."
ADA yakazowana zvigadziridzo zveMutemo munaGunyana 2008, uyo wakatanga kushanda musi waNdira 1, 2009. ADA Amendments Act ya2008 yakapa vashandi zvidziviriro zvakawandisa kupfuura zvaive mumutemo wekutanga.
Iyo ADA yaive chidimbu chakakura kwazvo chemutemo chaifukidza akasiyana maitiro ehupenyu hwe remara vanhu. Kuwedzera kune zvigadzirwa zve remara vashandi, ADA yakapawo nhungamiro pamasangano eruzhinji uye kutakura, pekugara paruzhinji nenzvimbo dzekutengesa, kufonera uye zvimwe zvinopihwa. Iyo ADA haina kungopa chete nhungamiro yekuitwa, asi zvakare akapiwa yezvekurwisa kusarura.
Kunyange maADA ari zvinodiwa kuyera nzvimbo yekutamba yevashandi vese zvainetsa kune vashandirwi kuitisa akapiwa yenzira dzekupa vashandi vese mukana wekuwana raramo. Nezve vashandi, iyo ADA inotaura kuti a chakavharwa chinhu haafanire kusaruramunhu anokwanisa ane kuremara. Izvi zvinoshanda kune maitiro ekunyorera basa, kuhaya, kufambira mberi uye kuburitsa vashandi, muripo wevashandi, kudzidziswa basa, uye mamwe mazwi, mamiriro, uye neropafadzo dzebasa.
MaAmerican ane Wekuremara Mutemo ya1990 uye zvinotevera zvakachinjwa zvakapa remara vashandi mukana wekushanda munzvimbo yakachengeteka uye isina rusarura. Kuti udzidze zvakawanda nezvevashandi neADA, takaunganidza muunganidzwa wezve zviwanikwa.
MaAmerican ane hurema Mutemo peji peji
ADA Mitemo uye Technical Assistance emirayiridzo
Jobho pekugara Network ADA Zviwanikwa
Kodzero Dzemabasa Pasi PADA
Vashandirwi Vanozvidavirira Pasi peADA
ADA YEMUBVUNZO MIBVUNZO
ADA Kugadziriswa kwe2008
ADA Rekushandisa Handbook
ADA Nongedzo Yemabhizinesi Madiki
Kukura Kwebhizinesi uye ADA
Kodzero dzevanhu veDJJ
Mitemo neMirau yeiyo remara
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti.
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na1800wiricheya - The hwiricheya chitoro.
Iyo Pharmacology Resource Peji
Zviwanikwa zveVabereki veVana vane Zvakakosha Zvido